OTTOMAN VS ITAFILE YEKOFU (IINKONZO KUNYE NEENGOZI) - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala Ottoman vs Itafile yekofu (Iinkonzo kunye neengozi)
Ottoman vs Itafile yekofu (Iinkonzo kunye neengozi)
Nasi isikhokelo sethu kwi-ottoman vs itafile yekofu kubandakanya ukulunga kunye nokubi kwaye loluphi uhlobo olulungele uyilo lwakho lwangaphakathi.
Ukukhetha phakathi kwe-ottoman kunye netafile yekofu kunzima. Zombini zinempawu ezintle. Ukwenza isigqibo, cinga ngento ebalulekileyo ebomini bakho.
Ukuba indawo oyithandayo yosuku ibeka iinyawo zakho phezulu kwaye ubukele umabonwakude, i-ottoman inokuthatha ukuphumla nokonwaba kwinqanaba elilandelayo.
Kwelinye icala, ukuba uyathanda ukuqokelela izihlobo zakho ngeziselo, kufuneka babeke iiglasi zabo kwenye indawo! Itafile yekofu iya kwenza umsebenzi ongcono wokuthintela ukuchitheka.
Itheyibhile yeKhofi kunye neengozi zayo
Iinkonzo zeOttoman kunye neCons
Sebenzisa i-Ottoman njengetafile yekofu
Ndiyiguqula njani itafile yam yeKofu ukuba ibe yi-Ottoman?
Itafile yekofu yitafile encinci, esezantsi ehleli embindini wendawo yokuhlala. Bahlala bedibanisa ukuphakama kwesingqengqelo okanye isihlalo sesofa. Ngelixa abantu banako kwaye besitya iitafile zekofu, banomtsalane kancinci kule njongo ngenxa yeprofayile yabo esezantsi.
Eyona njongo iphambili yetafile yekofu kukugcina, kokubini okusisigxina kunye okwethutyana. Itheyibhile yekofu yindawo ekubambeni kuyo ulawulo lwakho olukude, iincwadi kunye neemagazini, okanye nayiphi na into eluncedo onokuyifumana ezingubeni. Ingasetyenziselwa ukubamba amashwamshwam kunye neziselo ngelixa uhlala okanye ubukele imovie kwigumbi lokuhlala.
Ngaphandle komphezulu wetafile, ezinye iimodeli zinokubonisa iishelufa ezincinci ngaphantsi, okanye iidrowa zokugcina izinto zingabonakali.
Jonga le tafile yomthi womnga yomdongwe etafileni Indima 1. [ikhonkco elixhasiweyo]
Uhlobo lwezitayile - Iitafile zekofu ziyafumaneka kuluhlu lweentlobo kunye nobukhulu, kwaye zinokusetyenziswa kwizakhelo eziqhelekileyo okanye ezisesikweni Funda ngakumbi malunga nezahlukileyo izimbo zeesofa Apha.
Umphezulu wekhabhathi ozinzileyo - Olona loncedo lucacileyo lukhona apho kwigama- libonelela ngendawo ezinzileyo yeziselo ezifana nekomityi yekofu yasekuseni.
Easy ukucoca - Xa ukuchitheka kwenzeka ngokungathandabuzekiyo, kulula ukuzisula ngaphandle komonakalo wexesha elide etafileni. Kuya kufuneka usebenzise i-coaster ukukhusela umphezulu wetafile yekofu yomthi.
Iyahlala - Iitafile zekofu zenziwe ngezinto ezizinzileyo ezifana neglasi, ukhuni, isinyithi kunye nemabhile. Akukho ndwangu yokuphazamisa okanye ukukrazula. Itafile yekofu esemgangathweni inokulindelwa ukuba ihlale iminyaka eli-10 ukuya kwengama-20.
Yenza igumbi lokuhlala libonakale likhulu -Itheyibhile yekofu embhoxo isisombululo esihle sendawo encinci, kunye neekona ezijikeleziweyo ezivumela igumbi elongezelelekileyo ukuba lihambe. Ngethuba nje kukho indawo eyaneleyo yokujikeleza itafile yakho yekofu, inokusetyenziselwa ukwenza igumbi lakho lokuhlala libukeke likhulu.
Ukuphucula uyilo lwangaphakathi - Indawo evulekileyo phantsi kwetafile iyaphula imbonakalo yeesofa ezinkulu nezitulo. Ukuhlala kwigumbi lokuhlala kuhlala kune-squashy kwaye kunemiphetho ethambileyo, ejikelezileyo. Itafile yekofu enemigca ebukhali yongeza umdla. Funda ngakumbi malunga izitayile zengalo yesofa Apha. Jonga le tafile yekofu emnyama yomdaka kunye neglasi ephezulu Amazon [Ikhonkco elixhasiweyo]
Unokungena endleleni -Ukuba unetafile yekofu, ekugqibeleni uza kuya kuyo. Nokuba idolo lakho, i-shin, okanye iinzwane zithatha umthwalo wempembelelo kuko konke oku kulungiselelwe ingxoxo. Kuba izinto ezilukhuni ezifana neglasi ngokwesiko zisetyenziselwa ukwakha iitafile zekofu, xa ungqubeka kuyo, kubuhlungu!
r kunye b iingoma zomtshato
Ukuthintela oku kangangoko kunokwenzeka, qinisekisa ukuba unendawo eyaneleyo yokujikeleza itafile yekofu ngaphandle kokukhubeka. Umgaqo olungileyo wesithupha: itafile yakho yekofu kufuneka ubuncinci be-intshi ezili-16 zokucaca macala onke.
Isenokungakhuseleki kubantwana abancinci -Akukhona kuphela ukuba iitafile zekofu zinzima, zihlala zinemiphetho ebukhali kunye neekona ezibonisa. I-pointy, enyanisweni, ukuba ikhava yetafile yekofu iyimveliso eyaziwayo yokuvavanya umntwana.
Abancinci abanomdla kodwa abathandabuzayo banokubetha iintloko zabo kwitafile yekofu njengoko bethatha ukuwa, seso sizathu sesinye isizathu sokuba abanye abazali bakhethe i-ottoman endaweni yoko.
I-ottoman yifenitshala ephantsi, ephakanyisiweyo, engenamqolo enokuhlala kuyo okanye isetyenziswe njengesihlalo seenyawo. Bavame ukuba sisikwere okanye buxande ngokuma, nangona isetyhula okanye izitayile ze-oval ziyafumaneka.
Ngelixa umkhwa wokusebenzisa i-ottoman endaweni yetafile yekofu sele ususile kwiminyaka yakutshanje, le ndlela yefanitshala ineengcambu kubukhosi base-Ottoman. I-Turks kwi-1700s yaqwalaselwa ukuba isebenzise izitulo eziphantsi eziphakanyisiweyo njengezitulo zeenyawo kunye nembono esasazeka kwihlabathi liphela ukusuka apho.
Jonga le ottoman yokugcina iti kwi Indawo 1 [ikhonkco elixhasiweyo]
Ukuba unenjongo yokusebenzisa i-ottoman njengesihlalo seenyawo, kufuneka ubuncinci ibe yintshi enye ezantsi kuneesofa okanye izitulo kwigumbi lakho lokuhlala. Oku kuya kuthintela ukwandiswa okungaphezulu kwamadolo kwaye kukwenze kube lula ngakumbi ukubeka iinyawo zakho phezulu.
Ukuba ufuna ukusebenzisa i-ottoman njengesihlalo esongezelelweyo, ukuphakama kufuneka kube kufutshane nokuphakama kwezitulo zakho. I-ottoman emfutshane kakhulu iya kukhokelela ekubeni undwendwe olunye luhlale kwelinye inqanaba elahlukileyo kunelinye, elingelilo amava amnandi.
Zininzi iindlela ezahlukeneyo kunye nobungakanani bama-ottomans, kwaye ukhetho lwepateni yokuphakamisa izinto alunamkhawulo. I-ottoman inokusetyenziswa njengesiqwenga sesitetimenti esinelaphu eliqhelekileyo okanye umbala ongqindilili, okanye iphele ngasemva ngombala ongathathi cala ngakumbi.
Uninzi lwama-ottomans luyathengiswa ngesihlalo esifanayo njengenxalenye yeseti, kodwa zinokuthengwa zodwa. Ukubukeka okuhlangeneyo kweklasikhi, khangela i-ottoman efana nombala wakho, kodwa i-shades elula okanye emnyama.
Isiqwenga sefenitshala esinezinto ezininzi -I-ottoman yindawo yefenitshala yegumbi lokuhlala enokusetyenziselwa njengesihlalo seenyawo, indawo eyongezelelweyo yokuhlala, okanye njengetafile yekofu (enomhlaba owomeleleyo onjengetreyi).
Ukuthuthuzela -Ottomans badibanisa intuthuzelo kunye nobuhle. Ngaphantsi kwetafile yekofu embejembeje kodwa esesikweni ngakumbi kunesihlalo sebhegi yebhontshisi, le fenitshala inezinto ezininzi inendawo kulo naliphi na ikhaya.
Indawo yokugcina enokubakho - Ezinye iimodeli zinokuvulwa njengebhokisi, kunye nokugcinwa kweengubo ezingaphezulu kunye neepilo ezifihlwe ngaphakathi.
Intuthuzelo -Ungakhaba iinyawo zakho phezulu ngelixa uphumle kweyakho isofa yecandelo okanye isingqengqelo kumphezulu obutofotofo kunetafile yekofu.
Ukucoca -IiTurkey zihlala ziphakanyisiwe. Njengayo nayiphi na ifenitshala ephakanyisiweyo, ukuyigcina icocekile yeyona nto iphambili.
Ukunyanzela i-ottoman yakho ngesitshizi sokukhusela okanye ukuchitha ukuchitheka kunokukunika uxolo lwengqondo. Uya kufuna ukusula ngokukhawuleza okuchithe, ukunqanda ukungcoliswa.
Xa i-ottoman yakho iqala ukubonisa ukunxiba, kuya kufuneka uyitshintshe okanye uhlawule ukuphinda uhlawule, eyinkcitho eyongezelelweyo.
Bulky -Ii-Ottomans zihlala zincinci kwaye zixinene, kwaye kunokuba nzima ukuzilungisa ngokutsha ngaphandle koncedo, ukunciphisa ukusebenza kwazo ngokungafaniyo.
Ingathatha indawo -Ngokubonakalayo, i-ottoman ibhloka umgangatho phantsi kunye nesingqengqelo ngasemva kwayo, esinokwenza igumbi live ngathi lixinekile.
Ottomans baqala njengezihlalo zeenyawo kwaye abantu abaninzi bayakonwabela ukuzisebenzisela le njongo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuzisebenzisa njengetafile yekofu, uyakufuna ukongeza uhlobo oluthile lomhlaba onzima.
Itreyi ilungele le njongo, njengoko inokuhanjiswa ngokulula kwenye indawo ukuba ufuna ukubeka iinyawo zakho phezulu. Jonga itreyi ethatha ngaphezulu kwesiqingatha sommandla we-ottoman kwaye ungangoyena mhlaba mhle.
Ama-ottomans e-Hybrid lolunye ukhetho olukhulu. I-ottoman e-hybrid ihlala igcinwe ngaphakathi. Isiciko sinokuphakanyiswa size sitshintshwe ngaphezulu, sibhence itreyi okanye indawo elukhuni kwelinye icala.
Okanye, ukuba ufuna isihlalo seenyawo, kodwa abakulungelanga ukulahla itafile yakho yekofu, jonga iityhubhu eziphakanyisiweyo. Ezi zibiza kancinci kunee-ottomans kwaye zinokuba ncinane ngokwaneleyo ukuba zingabeka phantsi kwetafile.
Jonga le faux yokugcinwa kwesikhumba se-faux kwi Amazon [ikhonkco elixhasiweyo]
Kutshanje, iitafile zekofu zithandwa. Izinto zokuhombisa ezigudileyo kunye nemiphetho ye-ottoman zidityaniswe nemilenze kunye nesakhelo setafile yekofu.
Isiphumo sisiseko sebhentshi, enamathele phezulu nasemacaleni. Esi sisombululo kwingxaki ye-ottoman vs coffee table iyathandwa ngabantu abaneendawo ezincinci okanye abafuna ukubandakanya ii-angles kunye nokwandisa ukubonakala kokuhonjiswa kwabo.
Ungathenga ii-ottomans zetafile zekofu esele zenziwe kubathengisi abakhethekileyo nakwezinye iivenkile ezinkulu zebhokisi. Okanye, ukuba sele unayo itafile yekofu eyenziwe ngomthi, ungayisebenzisa njengesiseko, ukongeza amagwebu okanye ukugxotha kunye nelaphu lokuyiguqula libe yi-ottoman ye-hybrid.
Kuxhomekeke kubude betafile yekofu oyisebenzisayo, unokufuna ukunciphisa imilenze. Amagwebu amane e-intshi entofontofo anele ngokwaneleyo ukuba iindwendwe zihlale phantsi ngaphandle kokuva ubunzima bendawo yetafile yekofu ngaphantsi. Iya kongeza ii-intshi ezine zokuphakama. I-hacksaw yindlela engenangqondo yokunciphisa imilenze yetafile yekofu eyenziwe ngomthi.
Xa ulungele ukuqalisa, linganisa isiqwenga sogwebu sikhulu kancinci kunomphezulu wetafile yakho. Yinqumle usebenzisa imela eluncedo.
Tshiza izinto zokubambelela kwitheyibhile ecocekileyo neyomileyo, kwaye uncamathisele amagwebu. Vumela ixesha lokuncamathelisa ukunyanga ngokuhambelana nemikhombandlela kwitoti. Xa isincamathelisi siyanyangeka kwaye amagwebu eqhotyoshelwe ngokukhuselekileyo, yila ilaphu lokwenza izinto ngaphezulu, ushiye ukugqobhoza ngapha nangapha kuwo onke amacala.
Qinisekisa ukuba ilaphu ligudile kwaye ujonge kwicala lephethini, ukuba kufanelekile. Usebenzisa ukutya okuthathu okusuka kumpu oyintloko, bamba ilaphu uye emazantsi etafile embindini wecala ngalinye. Emva koko, ukungahoyi ikhoneni, sebenza indlela yakho ejikeleze umgca weetafile, ubeka umgca kumthi.
Okokugqibela, tuck kwikona ngokuqinileyo kwaye usebenzise isixa esivulekileyo sokutya ukuze uzikhusele kwaye unciphise ilaphu elingaphezulu. Ungasebenzisa iithowuni zokwenza izinto ukhuseleko olongezelelekileyo kunye nokuhombisa.
Xa kuziwa ekukhetheni i-ottoman vs itafile yekofu ixhomekeke kwiimfuno zakho kunye nezinto ozifunayo. I-ottoman inokwenza indawo yakho ibonakale ikhululekile kwaye yamkelekile, ngelixa itafile yekofu inokujongeka ngakumbi. Yintoni oyithandayo? Sazise ukuba ucinga ntoni ngezantsi.
Umxholo ongaphezulu okunxulumene noko jonga kwigalari yethu ye iintlobo zefenitshala yefenitshala .
usonge njani itshefu epokothweni
umtshato enkosi izimvo zekhadi
zingakanani iziqhamo zomtshato
iikowuti ezintle ozithumela kumfana wakho